Shirkii Ganacsatada Soomaaliyeed ee Dubai ay Ku yeesheen Boosaso oo qodobo laga soo saaray | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Ganacsiga Shirkii Ganacsatada Soomaaliyeed ee Dubai ay Ku yeesheen Boosaso oo qodobo laga...
Shirkii Ganacsatada Soomaaliyeed ee Dubai ay Ku yeesheen Boosaso oo qodobo laga soo saaray
Haddaba arintaas ka duwan ayaa ganacsatada Soomaaliyeed ee degan magaalada Dubai hasatay sanadihii ugu danbeeyey iyo kuwo ay ku soo xadgudbeen shaqsiyaad ay sheegeen inay ku qaraabanayaan shaarka dowladda Imaaraadka Carabta oo shir Jaraa’iid ku qabtay Magaalada Boosaaso ee gobalka Barri ayaa waxaa ay sheegeen in Arintaa taas ka duwan ay kala kulmeen rag amniyaadka Dubai ka tirsan ganactada Soomaaliyeed la iska xidho, la musaafuriyo loo caga-jugleeyo iyada oo ay ka faa’iidaysanayaan awood darida dowladda Soomaaliya iyo ducfiga safaaradfa soomalida ee Imaaraadka.
Shirka jaraa’iid inta uusan bilaaban ka hor waxaa shiray ganacsato gaaraya ilaa iyo Konton qof oo ganacsadayaal ah, kuwaasi oo ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyin ay sheegeen in ay ku hayaan dad gashan shaarka ciidanka Amniyaadka Dubai iyo rag kale.
Shirka ka dib waxaa ay Boosaaso ku qabteen shir saxaafadeed oo ay ka qayb galeen warbaahinta gudaha iyo kuwa dibadda.
“waxay kooxdaasi ula dhaqantaa ganacsata somaliyeed sidii xoolo xero kujira oo marba kan la doono la is kala soo baxayo Waxaana intaas noo sii dheer, waxay nimankaa amniyaadka sheeganayaa iska kaaya hortaageen sidii aanu maxkamadaha iyo cadaaladda wadanka u arki lahayn, si aanu dhibka na haysta ula socod siino” ” ayay ku sheegeen shirka jaraa’iid ee ay ku qabteen magaaladaBoosaaso qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee lagu soo dhibaateeyay dalka isku tagga Imaaraadka Carabta.
Dhibaatada iyo dulmiga lagu hayo Soomaalida Dubai waxaa ay sheegeen in ay ka dambeeyaan koox isku xidhan oo ka kooban Amniyaadka Dubai iyo Amniyad Jubba land ah iyo ganacsade reer Djibouti ah. Kooxdaas oo maslaxada hooda gaarka ah ku fushanaya mas’uuliyaddii lagu aaminay.
Beryahan dambe ganacsatada Soomaaliyeed waxaa lasoo gudboonaaday baqdin, Cabsi iyo welwel joogta ah oo ay ku hayaan kooxahaas is kaashanaya ee Amniyadka sheeganaya gaar ahaan Amniyaadka Dubai gaar ahaan qaybtooda qaabilsan soomalida.
Kaalinta rag ka tirsan saraakiisha Amniga Jubaland
Kooxdaasi waxaa lasheegay in ay waraaqo been abuur ah oo ganacsatada Soomaaliyeed (GS) ee degan Dubai lagu dhibaataynayo in ay ka helaan dad shaqsiyaad ah oo ka tirsanmaa mulka jubbaland, gaarahaan nin lasheegay in uu kashaqeeyo amniga kismayo oo lagu magacaabo khaalid.Ninkaas oo marar badan Dubai yimin lana ku lamay kooxda Obaid Abu Ali.
Sida lasheegay khaalid waa ninka amniyaddka Kismayo haysta waana ninka soo sharciyeeyena waraaqaha been abuurka ah ee somalida lagaga masaafuriyo wadanka Emirates ka.
Abshir Muumin oo ka mid ah ganacsatada warbaahinta la hadlay ayaa waxaa uu sheegay in ganacsatada Soomaaliyeed ee Dubai lagu hayo Tahdiid, caga-juglayn Musaafuris Sharci darro ah iyo in Shuruucdooda lagala noqdo.
Waxaa uu sheegay in ganacsatadu aanu haysan cadaaladda ay xaqa u lahaayeen ayadoo ay ka hor istaageen rag shabakad ah oo isku xiran oo ka kooban Soomaali iyo Carab.
Mursal Salaad, oo isaguna ka mid ahaa ganacsatada warbaahinta la hadashay ayaa sheegay in in ka badan 10 qof oo ka mid ah ganacsato ka soo jeedda deegaanada Puntland si sharci darro ah looga soo musaafuriyay dalka Imaaraadka ayadoo waliba aan la siin waqti ay hantidooda iyo qoysaskooda meel kaga soo ogaadaan.
Waxaa uu xusay in dhibaatada aan look ala eegan ganacsatada ayna saamaysaysay ganacsato dalkaasi ku sugnaa sanado badan sida 20 sano, 30 sano ilaa iyo 40 sano.
Maxamed Faarax Bayr,warbaahinta u akhriyay qodobo ay soo saareen ganacsatada.
1: waxaa ay baaq u direen dhammaan Hay’adaha ay qusayso arimahan inay wax ka qabtaan dhibaatada iyo xad gudubyada ka dhanka ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ka dhacaya Imaaraadka, gaar ahaan magaalada Dubai.
2: in la sii daayo dhammaan gacsatada haatan sida sharci darada ah ugu xiran dalka Imaaraadka.
3: in ganacsatada Shuruucdooda laga qaaday sida ugu dhaqsiyaha badan loogu soo ciliyo iyo in la joojiyo dhibaatada lagu hayo ganacsatada.
1:Cubayd abu Cali, UAE, tel:0502488985— waa ninka madaxda ka ah Shabaddan, wuxuuna haystaa amniga Dubai gaar ahaan qaybta soomalida.
Maxamed Catiiq —- Abu Cabdullahi, waa amniyaadka Dubai,waa ninka ganacsatada waraysta ee wuxuu doonana ku qorta computerka dabadeedna ganacsatada my khasba in ay wuxuu qoray saxeexaan khalad iyo saxba Atwater. Tel:0504406239
3: Axmed, waxaa uu u dhashay Imaaraadka, wuxuu ka shaqeeyaa amniyaadkaTel:0503583962.
Bashiir Khaliif Muuse (Bashir Mageffe) waxaa uu u dhashay dalka Djibouti.tel:00971506539281
War- saxaafadeedkan waxaa soo saaray ganacsatada somaliyeed ee magaalada Bossasso
Previous articleMadaxwaynaha Soomaaliya oo Muqdisho ugu khudbeeyay 1,200 oo askari (Sawiro)
Next articleLiiska 20 ka dal ee ugu halista badan & Soomaaliya oo ka maqan